गरे नेपालमै छ ! बाग्लुङ्गका गुमानसिंहले पानी बेचेरै महिनामा कमाउँछन् लाखौं रुपैंया – ताजा समाचार
गरे नेपालमै छ ! बाग्लुङ्गका गुमानसिंहले पानी बेचेरै महिनामा कमाउँछन् लाखौं रुपैंया
बागलुङ — यतिबेला उनी सफल व्यवसायी बनेका छन्। उनी बिहान ६ बजे उठेदेखि फोनको भरमा घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने काममा लाग्छन्। ‘दैनिक ४ सय घरमा पुग्छु,’ गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटीका ४० वर्षीय गुमानसिंह कार्कीले भने, ‘निरन्तरको कामले राम्रो कमाइ र सम्मान मिलेको छ।’
सदरमुकामको एक खानेपानी कम्पनीको मुख्य डिलर हुन् उनी। सुरुमा ठेलागाडामा पानी राखेर नाम्लो लगाएर तान्थे। उनको ओपन हर्ट सर्जरी गरिएकाले गह्रौं काम नगर्न सुझाव दिने धेरै भए पनि सजिलो रोजगारी दिने कोही भएनन्। खानपानमा ध्यान दिएकाले कडा परिश्रमबाट समस्या नभएको उनले बताए।
खानेपानी बोकेर ग्राहककोमा लग्दै गर्दा ।
‘रातदिन काममा खट्छु,’ कार्कीले भने, ‘१० लाख रुपैयाँ ऋण तिरें। घडेरी पनि जोडिसकेको छु।’ मासिक उनले डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन्। छोराछोरीलाई राम्रै विद्यालयमा पढाएका छन्।
कार्कीले सुरुमा ५ हजार रुपैयाँको लगानी गरी पानीका जार किनेका थिए। उनको दुःख देखेर स्थानीय यज्ञवल्लभ शर्माले १० हजार सहयोग गरेपछि कार्कीले रिक्सा किने। पछि ससुरालीतिरबाट १० हजार थपियो। श्रीमतीको साथ र आफ्नो हिम्मतलाई नै उनले सफलताको श्रेय दिन्छन्। ‘बोलाएपछि तत्कालै पानी ल्याइदिन्छन्, त्यसैले उनलाई धेरैले रुचाएका छन्,’ नियमित ग्राहक भूमिश्वर गौतमले भने, ‘इमानदारी र नरिसाएर काम गरिदिने बानीले मन जितेका छन्।’
एउटा जार बिक्री गर्दा २० रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्। दैनिक ४ सय जार बेच्दा ८ हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ। कमाइले २ गाडी र एउटा अटो मोपेट किनेका छन्। दुई जना चालक राखेका छन्। श्रीमती मीनाले मोपेट चलाउने गरेकी छन्।
खर्चविहीन अवस्थामा कार्कीले अपरेसन गर्नुपरेको थियो। बिरामी भएपछि काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले अप्रेसन गर्नुपर्छ भने। उनलाई ऋण तिर्ने चिन्ताले सताएको थियो। उनकी श्रीमती मीनाले अप्रेसन गर्न लगाइन्।
प्रकाशित भएको : September 27th, 2019